कमरेडहरू हिटलर बनेर निस्किए !
फागुन १५ गते साँझ, त्यस्तै ९ बजे हुनुपर्छ । ‘ग्रीन टी’ पिउँदै एकजना गाउँले साथीसँग कुखुरापालनबारे कुराकानी गरिरहेको थिएँ म्यासेजिङ एप (इमो)मा । अर्को मोबाइलमा अचानक माओवादीका एकजना प्रभावशाली नेताको फोन आयो । ती नेताले धेरै कुरा खुलाए ।
केही सीप नलागेर मनको तनाव मेटाउन मलाई फोन गर्नेहरू म अलग्गै चिन्छु । कुखुराको सपेटा र ‘ओल्ड दरबार’ ह्विस्की मिलेको दिन ती लामो समयसम्म गायब हुन्छन् ।
अक्सर पद चाहियो भने पेचिलो समयमा ती भयानक राँको बालेर पैदा हुन्छन् । वर्षात्को नदीले बगाएकी युवतीलाई उद्धार गर्न नेपाली कथानक चलचित्रमा हिरो झुल्किएजस्तै ती बडो क्रान्तिकारी भाष्यको लवजमा बोल्छन्, र भन्छन्, ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? हुँदै हुँदैन ।’
‘अहिले माओवादीबारे लेख्ने विषय नै छैन, लेख्नका लागि एङ्गल चाहिने होला । शहीदको सपना, शहीद परिवारको पीडा र घाइतेको घाउ माओवादीको लागि एङ्गल हुन छाडेको वर्षौं भइसक्यो । अब त ती सब झुटो कथाजस्तो लाग्छन् । यी विषयमा छवि ओझाले चलचित्र बनाए हुन्थ्यो ।’
ती गर्जिए, ‘एमाले हुन पनि त सजिलो छैन । जबज मानेर जाने कुरा त झन् सजिलो छैन । पार्टीलाई एमालेकरण गराउने कुरा सजिलो छैन । पद बाँडफाँटको कुरा सबैलाई समावेशी तरिकाले मिलाएर लैजाने कुरामा सजिलो छैन, के सजिलो छ ?’
यत्तिमै रोकिएनन्, अझै गर्जिए, ‘हेर्नुुस्, यहाँ टिकट बाँडफाँटलगायत राजनीतिक नियुक्तिहरू हिटलरी शैलीमा हुँदै आएका छन् । यहाँ करोडौँको चलखेलमा कामहरू सम्पन्न हुँदै आएका छन् । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाउने काम हुँदै आएका छन् । अझ भनौँ भित्तामै पुर्‍याउने काम भएका छन् ।’
तिनले आफ्नो गर्जनलाई बढवा दिँदै थपे, ‘हाम्रो कुरा नपत्याए कस्को कुरा पत्याउँछन् तिनले ? राजा फालेको हाम्ले हैन ? हाम्ले लडेर आएको गणतन्त्र हैन यो ? हाम्ले नयाँ संविधान बनाएको हैन ? अनि हाम्ले समावेशी, समानुपातिक, पहिचान र संघीयताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको हैन ? हाम्ले महिलाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा आउने अवस्था सिर्जना गरेको हैन ? जे भने पनि हुने यत्रो वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता हाम्ले दिलाएको हैन ?’
कमरेडलाई मैले भनेँ, ‘दिलाएको त हाम्ले नै हो । तर के गर्ने देश डा. गोविन्द केसी र रवि लामिछानेको पछाडि कुद्या छ । गोपाल पराजुली, चुडामणिको पछाडि पनि कुदीनै राख्या छ । आरजू देउवाले देश हल्लाएको अवगत छ कि छैन ? राजा फालेर के गर्ने ? रानी बाँकी रहेसम्म ? गणतन्त्र लिएर के गर्ने ? प्रजा बाँकी रहेसम्म ? फेरि भोलि बिहानै अखबारमा देशले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने पनि आउन सक्छ ।’
झलनाथजस्ता ठूला नेताहरूको चाहनालाई लत्याउँदै भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरियो । भण्डारीसंगै नन्दकिशोर पुनको पालो रोकिएन, मुलुकको दोस्रो वरीयातामा यथावत रहे र हिटलरी शासन रहेसम्म रहिरहनेछन् ।